ပထမဆုံးဗမာပြည်သို့ သာသနာပြုဆရာကြီး အာဒိုနီယမ်ယုဒသန်၏အသက်တာပြောင်းလဲခြင်း | Real Conversion
ပထမဆုံးဗမာပြည်သို့ သာသနာပြုဆရာကြီး အာဒိုနီယမ်ယုဒသန်၏အသက်တာပြောင်းလဲခြင်း
၂၀၁၂၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၉ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့ည နေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်
သို့မရောက်ရကြ။ (ရှင်မဿဲ ၁၈း၃)။
ဤဒေသနာတော်သည် အထုပ္ပတ္တိနှင့်ဆိုင်သောဒေသနာတော်ဖြစ်ပါမည်။ (၁၇၈၈-၁၈၅၀)ခုနှစ်အသက် တာပြောင်းလဲခဲ့သောအဒိုနီယမ်ယုဒသန်၏ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းသမိုင်းကြောင်းကို ဝေငှလိုပါသည်။ သူ့၏အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းသည် အသင်းတော်၌ရှိ လူငယ်များစိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မည်ထင်ပါသည်။ ကြိုးစားရုန်းကန်ပြီး အသက်တာပြောင်းလဲခဲ့သော “အသင်းတော်လူငယ်” ထိုသူသည်အသင်းတော်လူငယ် များအဖို့ပုံဥပမာ တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။
အဒိုနီယမ်ယုဒသန်သည် မြောက်အမေရိကမှ နိုင်ငံရပ်ဝေးခြားနယ်မြေသို့ သာသနာပြုစေလွှတ်ခံရသော သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ၁၈၁၂၊ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၉ရက်နေ့တွင်၊ အာဒိုနိယမ်နှင့်ဇနီးအန်းယုဒသန်တို့သည် အိန္ဒိယသို့သွားရန်ကတ်ကုတ်မှ မစ္ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်သို့ ရွက်လွှင့်သွားခဲ့ကြသည်။ (ယခုမြန်မာ) ဟုခေါ် သောဗမာပြည်သို့ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ယူဆောင်သွားခဲ့သူဖြစ်သည။ ဘယ်သာသနာပြုဆရာများ ကမှမသွားရောက်ခဲ့ဖူးသော ဘုရားမဲ့နယ်မြေသို့ယုဒသန်သည် အခက်ခဲ့ပေါင်းများစွာတွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ အကျဉ်းထောင်ထဲသွင်းချခြင်းခံခဲ့ရသည်။ မိသားစု၌လည်းဝမ်းနည်းဖွယ်မျိုးစုံကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဆရာကြီး ယုဒသန်သည် ဘုရာမဲ့လူသားများကို ခရစ်တော်သခင်ထံပို့ဆောင်ဖို့နှင့် သမ္မာကျမ်းစာကို မြန်မာလိုဘာ သာပြန်ဆိုဖို့အခက်ခဲ့များရှိသော်လည်းနောက်မဆုတ်ခဲ့ပါ။ မည်ကဲ့သို့ ဆရာကြီးယုဒသန်သည် ယုံကြည် ခြင်းခိုင်မာသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သနည်း? သူ့ဘ၀အသက်တာကို ဖတ်ရူလေ့လာသောအခါ၊ သူသည်နယ်မြေ ခြားသာသနာခရီးအစပြုမသွားခင်မှာ၊ သူ့၏ငယ်ရွယ်စဉ်ဘ၀၌ မိမိ၏ခရစ်ယာန် အသက်တာကို အခြေအမြစ်ခိုင်မာစွာချထားခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်နားလည်သဘောပေါက်မိပါသည်။ ကော့နီအန်ဒါဆန်ရေးသား ခဲ့သော ဤဒေသနာတော်စာအုပ်ဖြစ်သော To the Golden Shore: The Life of Adoniram Judson အပေါ်မှီခိုအားကိုးခဲ့သည်။ (Judson Press, 1987 edition).
သူ့၏နာမည်မှာ အဒိုနီယမ်ယုဒသန်ဂျေအာရ်ဖြစ်ပြီး သူ့အဖေနာမည်မှာအာဒိုနီယမ်ယုဒသန်အက်စ်အာရ် ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏အဖေသည် နာမည်ကျော်အမှုဆောင်ဆရာတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ယုဒသန်သည် ငယ်ရွယ် စဉ်ကပင် ဖခင်အားချစ်ကြောက်ရိုသေသူဖြစ်သည်။ သူအဖေသည်လည်း ရိုသေလေးစားကြောက်ရွှံ့ဖွယ် ကောင်းနေသူဖြစ်နေ၍ဖြစ်သည်။ သူသည်ရယ်ရယ်မော့မော့နေထိုင်တတ်သူမဟုတ်ခဲ့ပါ။ မိမိကိုကိုစည်း ကမ်းတကျ၊ တင်းကြပ်စွာနေထိုင်တော်သူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင် အာဒိုနီယမ်ယုဒသန်သည် သူအဖေ နှင့်ဘုရားရှင်ကဲ့သို့ မိမိကိုကိုလူဘုံအလယ်မှာ နေထိုင်တတ်သူဖြစ်လာခဲ့သည်။
အာဒိုနီယမ်သည် သုံးနှစ်လောက်သာ ပညာလေ့လာဆည်းဖူးခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ကိုကြည့်ရင်း သူ့ဖခင်သည်လည်း အာဒိုနီယမ်သည် တနေ့လျှင်လူကြီးသူကောင်းဖြစ်လာမည်ကို ယုံကြည်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်လာမည်ကိုလည်း အာဒိုနီယမ်အားဖခင်က မကြာခဏတိုက်တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ သူ့ဖခင် သည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးလျှက် အစေခံသူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် သူ့သားနယူးအင်္ဂလန်အသင်းတော်၌ အောင်မြင်ကျော်ကြားသော အမှုတော်ဆောင်တဦးဖြစ်စေလိုသည်။ သူ့ဖခင်အားကိုးမျှော်လင့်သကဲ့သို့ သူသည်အောင်မြင်ကျော်ကြားသော အမှုတော်ဆောင်တဦးဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
ငယ်ရွယ်စဉ်က သူဖတ်ခဲ့ဖူးသောဖခင်၏ မည်သည့်စာအုပ်မဆိုသူပိုင်ဆိုင်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုသို့ တိုင်အောင်သူ၌ ပြည့်ပြည့်စုံနေသူ၊ အဆင်သင့်သူမဟုတ်သေးပါ။ သူအသက်၁၀နှစ်ရှိသောအခါ သင်္ချာပ ညာရှင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ ဂရိနှင့်လေတင်ဘာသာရပ်ကို လေ့လာဆည်းဖူးနေပြီးဖြစ် သည်။ သူ့ဖခင်ကလည်း “သင်သည်ထက်မြတ်သော သားလေးပါ၊ အာဒိုနီယမ်ရယ်၊ ကြီးမြတ်အောင်မြင် သောသူဖြစ်လာမည်ဟု ငါမျှော်လင့်တယ်ကွာ” ဟူ၍အားပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုစကားဖြင့် အာဒိုနီယမ် အား အားဆေးဖြစ်စေခဲ့သည်။ “အောင်မြင်သောသူဖြစ်မည်ဟု ငါမျှော်လင့်တယ်”ဟူသောစကားသည် အာဒိုနီယမ်အားခွန်အားဖြစ်စေခဲ့သည်။
သူ့ဖခင်၏အသင်းတော်နှစ်ခြင်းကွဲသွားခဲ့သည်။ နောက်တနေရာတွင် အသင်းတော်တခု၌ သင်းအုပ်အ မှုတော်ဆောင်ရန်ပြောင်းရွှေသွားခဲ့ကြသည်။ အာဒိုနီယမ်သည် သူဖခင်အားရိုသေလေးစားခဲ့သည်မှာ “ဘယ်တော့အခါမှအပေးအယူမပြုလုပ်ခဲ့သောလုပ်ရပ်”ကို သူ့ဖခင်အားလေးစားမိသည်။
အာဒိုနီယမ်စဉ်းစားခဲ့ဖူးသည်မှာ၊ ဤကံကြမ္မာဆိုးကနောင်တွင်၊ လူထုမိန့်ခွန်းပြောတတ်သူ၊ ကဗျာတ ပုဒ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံကျော်နိုင်ငံရေးသမား၊ ဂျွန်အာဒံကဲ့သို့ဖြစ်လာစေရမည်။ ဤအကြောင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း ၍ရေးသားသောစာအုပ်၊ စာပေကိုသူတပါးတို့က ချစ်ခင်လေးစားပြီးထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာစေလိမ့်မည်ဟု ခံစားခဲ့ဖူးသည်။
သူသည်စစ်မှန်သော သာသနာရေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ချင်လာခဲ့သည်။ မည်ပုံမည်ကဲ့သို့ စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာပြီးကျော်ကြားသောသူဖြစ်လာမလဲ?။ သူဖျား၍ အိပ်ရာကုတင်၌လဲလှောင်းနေစဉ်တွင် “ကိုယ်တော့်နာမဘုန်းကြီးမြတ်ပါစေ၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖို့မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖို့မဟုတ်” ဟူသောအသံတော် ကို သူ့နှလုံးသားထဲကြားယောင်နေမိသည်။ ဤသည်အဘယ်မည်သော နိုင်ငံကျော်သင်းအုပ်ဆရာလည်းမ ဟုတ်သူ ထာ၀ရအရှင်သခင်က အသံကျယ်ကျယ်ပီပီသသနှင့် အာဒိုနီယမ်အားနှိုးဆော်စေခြင်းဖြစ်မည်။ ကမ္ဘာကြီးကမိမိအတွက် သူရဲကောင်းရွေးချယ်ရာတွင် မှားယွင်းနေပြီ။ ကမ္ဘာကြီးကအမှန်တရားအတိုင်းတ ရားစီရင်ခြင်းမရှိခဲ့ပြီ။ အဘယ်မည်သောနိုင်ငံကျော် သင်းအုပ်ဆရာမဟုတ်ခဲ့သော်သင်းအုပ်ဆရာ အရှင်သ ခင်သည် ကမ္ဘာလောကကြီး၌ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူအပေါင်းတို့ထက် ကြီးမြတ်သောသခင်ဖြစ်သည်။ ထိုအရှင်သည် သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ “ကျွန်ုပ်တို့အဖို့မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖို့မဟုတ် ကိုယ် တော်နာမဘုန်းကြီးမြတ်ပါစေဟူ၍ စိတ်နှလုံးသားထဲတုန်ခါစေခဲ့သည်။ ဤထူးဆန်းသောအသံက အာဒိုနီ ယမ်အား လူးလဲခံစားစေခဲ့သည်။
မကြာမီထိုအတွေးများအားလုံးကို မိမိနှလုံးသားထဲကဖယ်ရှားလိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း နှလုံး ထဲ၌ ၎င်းအသံကို မေ့မရဖြစ်နေခဲ့သည်။ အသက်၁၆နှစ်အရွယ်တွင် အာဒိုနီယမ်သည် ကောလိပ်တက်ဖို့အ ဆင်သင့်နေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သူ့ဖခင်က သို့ မိမိတို့အိမ်နှင့် အလှမ်းဝေးသောကြောင်မစေ လွှတ်ခဲ့ပါ။ တက္ကသိုလ်သည် အိမ်နှင့်၁၅မိုင်သာဝေးသော်လည်း ဖြစ်နေသဖြင့်၎င်း ကျောင်းသို့မပို့ဖြစ်ခဲ့ပါ။ ဖခင်ယုဒသန်သည် သူ့သားအား သို့စေလွှတ် ပညာသင်စေခဲ့သည်။ မကြာမီ၎င်းကျောင်းတော်ကြီးသည် ဟူ၍ အသွင်ပြောင်းလဲခဲ့ သည်။ ယုဒသန်က၎င်းကျောင်းသည် သမ္မကျမ်းစာတော်နှင့် ညီညွှတ်သောကျောင်းဖြစ်သည်ဟုသိရှိ ခဲ့သည်။ ယုဒသန်က သူ့သားအာဒိုနီယမ်အဖို့၎င်းကျောင်းသည် သင့်တော်ပြီးလုံခြုံသည်ကို သိရှိခဲ့ သည်။
အာဒိုနီယမ်သည် လေတင်ဘာသာ၊ ဂရိဘာသာ၊ သင်္ချာဘာသာရပ်၊ နတ္ခ်က်ဗေဒဘာသာရပ်၊ ယုတ္တိ ဗေဒ၊ လူထုမိန့်ခွန်းပြောခြင်းအတတ်ပညာနှင့် အတွေးအခေါ်ပညာရပ်များ၌ လေ့ကျက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ပထမနှစ်ကို မတက်တော့ပဲ ဒုတိယနှစ်၌ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူ့၏ပါမောက္ခကလည်း အာဒိုနီယမ် သည် ထူးချွန်သူဟူ၍ ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ စာသင်ချိန်ပြီးဆုံးချိန်တွင် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးလာသူ့ဖ ခင်အား စာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့သည်မှာ အာဒိုနီယမ်သည် “ချစ်စရာကောင်းပြီးအောင်မြင်ကျော်ကြားရန်အ လားအလာရှိသောသူ” ဖြစ်သည်ဟူ၍ ပေးပို့ခဲ့သည်။ ထိုစာကို သူ့ဖခင်ဖတ်သောအခါ ဝမ်းသာပီတိဖြာ လေတော့၏။
ကျောင်းပြီးသွားသော်လည်း အမှုတော်ဆောင်သားပီပီ၂ပတ်အကြာ ဆုတောင်းအစည်းအဝေး၌ဆုတောင်း
ခဲ့သေးသည်။ မယုံကြည်သောသူများအပေါ် ဂုဏ်ယူဝါကြွားမည်အစား ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာကို လျို့ဝှက်ခဲ့သည်။
မကြာမှီအာဒိုနီယမ်သည် သူထက်အသက်ကြီးသော ယာကုပ်အီမန်နှင့် အသိမိတ်ဆွေဖြစ်လာခဲ့သည်။ အီမန်သည် အစွမ်းအစရှိသောသူဖြစ်သည်။ သို့သော်သူသည် ခရစ်ယာန်တဦးမဟုတ်ခဲ့-ဘုရားမဲ့သောသူ ဖြစ်၏။ သူတို့နှစ်ဦးသည် အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေများဖြစ်ကြသည်။ အီမန်ကဩဇာလွှမ်းမိုးသောကြောင့် အာဒိုနီယမ်သည်လည်း မယုံကြည်သူ သူ့သူငယ်ချင်းအီမန်ကဲ့သို့ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုအခြေအနေကို သူဖ ခင်ကြားသိသောအခါ၊ သူ့သားအားထိုကျောင်းမှ ချက်ချင်းထုတ်ယူခဲ့သည်။ ယုဒသန်သည် နှင့် ကိုမကြိုက်မနှစ်သက်သူဖြစ်သည်။ ထိုထက်မက ကိုမူအမုန်းဆုံးဖြစ်၏။ အယူဆိုသည်မှာ သမ္မာကျမ်းစာကို လုံးလုံးလျှားလျှားမယုံကြည်သူတွေပါ။ ထိုသူတို့က ဘုရားတဆူရှိတယ်၊ သို့သော် လူသားများနှင့်မပါတ်သက်ဘူးဟူ၍ လက္ခံသောအုပ်စုပင်ဖြစ် သည်။ ထိုသူတို့က ယေရှုခရစ်သည် ဘုရားသားဖြစ်သည်ကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ ကောင်းကင်ဘုံနှင့်ငရဲရှိ သည်ဟုပင် မယုံကြည်ကြပါ။ အသွေးတော်နှင့် ရွေးနုတ်ခြင်းကိုလည်းမယုံကြည်ကြပါ။ ယုဒသန် သည် သူ့သားအားအီမန်ကမည်ကဲ့သို့ သွေးဆောင်နေသည်ကို မသိလိုက်ခဲ့ချေ။
ယာကုပ်အီမန်သည် အာဒိုနီယမ်ကဲ့သို့လူငယ်များကို လမ်းမှားစေသောခေါင်းဆောင်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့နှစ်ယောက်သည် အတူသွား၊ အတူလာ၊ အတူကစား၊ အမျိုးသမီးများနှင့် ပါတီပွဲသို့အတူတကွ သွားသောအပေါင်းအဖော်ဖြစ်သည်။ ဤလူကလေးတို့သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို စိတ်မဝင်းစားကြချေ။ ထိုသူတို့ပြောနေကျစကားသည် တနေ့သူဌေးဖြစ်လာရမည်။ စာရေးဆရာဖြစ်လာမည်၊ ပြဇက်ဆရာ ဖြစ်လာ ရမည်ပြီးတော့ မင်းသား၊ မင်းသမီးဖြစ်လာရမည်ဟူ၍သာပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ နယူးအမေရိက၌ ကျော်ကြားသော ရှိတ်စပီးယားနှင့် ကောစဖက်စ်ကဲ့သို့ဖြစ်လိုကြသည်။ သူ့ဖခင်သင်ကြားပေးခဲ့သော ဘာသာ ရေးနှင့်ပါတ်သက်သမျှအီမန်က “လွဲချော်” စေခဲ့သည်။ ဖခင်၏ ခံယူချက်မှကျော်ကြားလိုမှုသို့ ပြောင်းလဲစေ ခဲ့သည်။
သို့သော် အာဒိုနီယမ်သည် အတွေးပျော့ညံသောသူမဟုတ်ခဲ့ပါ။ သူ့အဖေကိုးကွယ်သောဘုရားကိုငြင်း ပယ်ခြင်းသည် စိတ်နှလုံးသားထဲ အမြတ်တနိုးထားသော ဖခင်ကိုငြင်းပယ်ရာကျမည်ဟု တွေးခေါ်တတ်သူ ဖြစ်သည်။ သူ့အဖေခွင့်မပြုသောအရာကို လက္ခံဖို့ကြောက်ရွံ့သူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒုတိယနှစ်ဝက်စာ သင်ချိန်၊ အိမ်ကိုခဏအပြန်တွင် မိမိသိထားသော အကြောင်းအရာများအားသူ့ဖခင်ကို မပြောပြခဲ့ပါ။
အာဒိုနီယမ်သည် အတန်းထဲတွင် ပထမဆွတ်ခူးသူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူ့အားဘွဲနှင်းသဘင်တွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားဖို့ရန် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ မိမိသည် ဂုဏ်ထူးဆောင်သည်ကို သိသောအခါ သူ့ဖခင်ထံ သို့ “အဖေ၊ အဖေ့ချီးကျူးသကဲ့သို့သားအေဂျေ ဖြစ်ပြီ” ဟူ၍ ရေးသားပေးပို့ခဲ့သည်။ ဘွဲနှင်းသဘင် အခန်းအနားသို့ရောက်သောအခါ အာဒိုနီယမ်သည် လူထုပရိသတ်များရှေ့တွင် မိခင်နှင့်ဖခင် အားဂုဏ် ပြုချီးကျူးစ ကားပြောကြားခဲ့သည်။
ဤသို့ဖြင့်၊ အသက်၁၉နှစ်ပြည့်သောအခါ၊ မိမိဘ၀အသက်တာအတွက် အလုပ်ရုန်းကန်ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သို့သော် မိမိဘ၀မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာမည်ကို မသိနားမလည်ချေ။ တနင်္ဂနွေနေ့နေ့ တိုင်း၊ သူ့မိဘများနှင့်ဘုရားကျောင်းသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူသားသည်မယုံကြည်သူဖြစ်နေ သည်ကို သူ့မိဘမသိခဲ့ချေ။ သူ့မိဘနှင့်အတူ ဆုတောင်းတဲ့အချိန်တိုင်း၊ အာဒိုနီယမ်သည် သူတော်ကောင်း ယောင်ဆောင်နေသူဖြစ်သည်ဟု မိမိကိုကို ခံစားမိသည်။
အပတ်တိုင်းလိုလိုပင် ငြိမ်သက်ခြင်းမရပဲအသက်ရှင်ခဲ့သည်။ သူ့အပေါ် ယာကုပ် အီမန်နှင့်ပြော ခဲ့သမျှ မိမိဘ၀အောင်မြင်ခြင်းကို စဉ်းစားနေမိ၏။ ထိုနှစ်နွေရာသီတွင် အိမ်ကိုစွန့်ပြီး နယူယောက်မြို့သို့ ထွက်ခွါရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်ပြဇက်အဖွဲ့သားများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး ဇာတ်ညွှန်းရေးသားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ၏။၎င်းနှင့် ပါတ်သက်၍ ဇာတ်လမ်းထွင်ရေးသားခဲ့သည်။ သူ့မိဘများဆိုဆုံးမခဲ့သော နယူးယောက်မြို့ သည် ဒုစရိုက်သားများပြည့်နှက်သော အမေရိကန်နိုင်ငံမြို့တော်ဖြစ်သည်ဟူသော စကားကို သတိရ လာခဲ့သည်။ သောဒုံနှင့်ဂေါမောရမြို့နှင့်တူသည်ဟူသော စကားကိုအမှတ်ရခဲ့၏။ ရုပ်ရှင်ဆိုသည်မှာ ပျက် စီးခြင်းနှင့်သေခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံသည်ဟူသော မိဘ၏သွန်သင်စကားများကို သတိရလာသည်။ သို့သော် အဒိုနီယမ်၏ အတွေး၌ကား၊ မိဘတို့သည် အတွေးကျဉ်းမြောင်းလွမ်းသည်ဟုထင်ခဲ့သည်။
မကြာမှီ နယူးယောက်မြို့သို့ ထွက်ခွါပါတော့မည်။ သူ့မိဘများကသူတို့သားအား လကမ္ဘာကိုသွားမည် လူအလား တမူထူးခြားပြောဆို ဆုံးမကြသည်! မိဘဆုံးမစကားများ သွန်းသင်းချက်များအားလုံးစွန်ပစ် သွားမည်ကိုမူမသိခဲ့ကြချေ။ ထိုအခါ အာဒိုနီယမ်သည် သူစွဲကိုင်ထားသောအမှန်တရားနှင့် ရှုပ်ထွေးလာခဲ့ ပြီးဖြစ်သည်။ မိဘတို့၏ ဘုရားသည် သူ၏ဘုရားမဟုတ်ဟုတွေး၏။ သမ္မာကျမ်းစာကို မယုံကြည် တော့ပါ။ ယေရှုသည် ဘုရားသားဖြစ်သည်ကို မယုံကြည်တော့ပေ။
သူ့ဖခင်ဖြစ်စေလိုသမျှ မအောင်မြင်ခဲ့တော့ပေ။ သူ့အမေသည် သူ့နောက်သို့ငို၍တကောက်ကောက် လိုက်ခဲ့၏”မင်းအမေ၏ ဆန္ဒကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ” ဟူ၍ ငိုလျှက်သူ့သားအားဆိုခဲ့၏။ သူ့သားအာဒိုနီ ယမ်ကို အရမ်းချစ်ခဲ့သည်။ သူ့မိခင်၏ညစဉ်ညတိုင်း သူ့အဖို့ဆုတောင်းပေးခြင်းကို သူ့ကိုယ်တိုင်နားကြား ခဲ့သည်။
အာဒိုနီယမ်သည် ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ၆ရက်ကြာစဉ်းစားခဲ့သည်။ ထိုနောက်မြင်းစီး၍ နယူးယောက်မြို့သို့ ထွက်ခွါခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုနေရာသို့ရောက်သောအခါ သူ့စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သလို ဖြစ်မလာခဲ့ပါ။ သူ့ကိုမည်သူကမှ မကြိုဆိုခဲ့ပါ အလုပ်လည်းဝင်လုပ်စရာမရှိခဲ့ပါ။ အတန်ကြာတစ် ယောက်တည်း ခရီးထွက်မလာခင်အထိအလွမ်းဖျား၍ နေထိုင်ခဲ့၏။
နေဝင်သောအခါ ရွာငယ်လေးတရွာသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ တည်းခိုခန်းရှာဖွေခဲ့သည်။ အခန်းလည်းလူ ပြည့်နီးပါးဖြစ်၍ တစ်ခန်းတည်းသာလွှတ်၏ ပိုင်ရှင်ကမင်းအိပ်ခန်းသည် အသည်းထန်းဖျားသော လူငယ်လေးတစ်ယောက်အိပ်ခန်းကပ်ရပ် ဖြစ်သည်ဟုပြော၏။ စိတ်မသက်မသာစွာဖြင့် ထိုညကိုကျော် လွန်ခဲ့သည်။
သူအိပ်မပျော်ခဲ့ပါ၊ ထိုလူနာ၏ညဉ်းညူသံ လူအသွားအလာသံများကို ကြားရသဖြင့်အိပ်မပျော်ခဲ့ပါ။ ထိုအသံဆူညံခြင်းက သူ့ကိုကသိကအောက်မဖြစ်စေခဲ့ဘူး။ အကြောင်းမှာ ထိုလူနာသည် သေလုနီးပါး အသည်းအထန်ဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါလား။ သေခြင်းဆိုဒါ အသက်အရွယ်မရွေးပါဘူး။ နယူးအင်္ဂလန်၌ လည်း လူသည်သေနေကြတာပဲ့လေ။
အာဒိုနီယမ်ကို ကသိကအောက်ဖြစ်စေသည်မှာ ထိုလူနာသည် သေပြီးဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာ။အရေး တကြီးစဉ်းစားစရာရှိနေသည် သူ့ကိုသူသေခြင်းအတွက် ပြင်ဆင်ပြီးပြီးလား။ ထိုအတွေးက အိပ်အိပ်နိုးနိုး စဉ်းစားစရာဖြစ်နေခဲ့သည်။ သူသည် သေခြင်းနှင့်ငရဲကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတာ တွေးပူနေခဲ့၏ သူ့ဖခင်မှာ သေခြင်းကိုကြိုဆိုနေသူပါ။ အကြောင်းမှာ ကောင်ကင်ဘုံ၌ ထာ၀ရအသက်ရရှိနေလို့ပေါ့။ အာဒိုနီယမ်အတွက်တော့ သေခြင်းအတွက်ဘာမှပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သေခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ အ မှောင်ထုဖုံးလွှမ်းနေဆဲပါ။ လူ့ခန္ခာကိုယ်သည် ဆွေ့မြေ့ပါလိမ်မည်။ အိုမင်းလာပါလိမ့်မည်။ ခေါင်းတ လား၌ ထည့်သွင်းကြပြီး သင်္ဂြိုလ်ကြပါလိမ်မည်။ သည်လိုနှင့်မည်သည့်ရာစုနှစ်၌ ကုန်ဆုံးမည်နည်းဟူ၍ တွေးတောစဉ်းစားနေခဲ့သည်။
သို့သော် တဖတ်မှာ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ယံ၌ ဤကဲ့သို့တွေးတောခြင်းက ရယ်စရာပင်ဖြစ်သည်ဟူ၍ ရယ်မောမိ၏။ သူ၏ကောလိပ်သူငယ်ချင်းက ဤကြောက်စရာသေခြင်းကို ညဉ်နက်သန်းခေါင်းယံ၌မစဉ်း စားမိဘူးလား။ ဤအရာအားလုံးကို ယာကုပ်အီမာန် မစဉ်းစားခဲ့ဘူးလား။ ဤအမှန်ကသူ့ကို သရော် ပြောင်လှောင်နေမည်။ ကျွန်ုပ်လည်းအရှက်ရပေမည်ဟု မိမိကိုကိုစဉ်းစားမိသည်။
မနက်နေရောင်အလင်းတန်း မိမိအခန်းထဲထိုးကျမှဘဲ၊ မနက်အိပ်ရာမှနိုးထခဲ့သည်။ သူ့တွေးကြောက်သ မျှ အမှောင်ထုထဲလွင့်ပျောက်သွားခဲ့ပြီ။ သူသည်ညဉ့်နက်သန်းခေါင်းယံချိန် ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိခဲ့ဖူးသူ မဟုတ်ပါ။ အဝတ်အစားအသစ်လဲပြီး အောက်ထပ်သို့မနက်စာစားရန်ဆင်းလာခဲ့သည်။ တည်းခိုခန်းပိုင် ရှင်ကိုတွေ့ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကို ရှင်းပေးခဲ့သည်။ ဘေးခန်းက အသည်းအထန်လူနာနေကောင်းပြီ လားဟူ၍ မေးဖြစ်ခဲ့၏။ ထိုသူက “ထိုလူငယ်သေသွားပြီ” ဟုဖြေသည်။ အာဒိုနီယမ်က “ထိုသူကို သင်သိပါသလား?”ဟုမေးဖြစ်ခဲ့၏။ တည်းခိုခန်းပိုင်ရှင်က “ဟုတ်ကဲ့သူဟာ မြသတည Uညငလနမျငအပ ကပါ” ဟူ၍ဖြေ၏။ သူ့နာမည်မှာ ယာကုပ်အီမန်ဖြစ်သည်ဟု ဖြေခဲ့၏။ သူသည် သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းကောင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားကိုမယုံကြည်သူ ယာကုပ်အီမန်သည် သူ့ရဲ့အခန်းဘေးကပရပ် အခန်း၌သေဆုံး ခဲ့ရှာသည်။
အာဒိုနီယမ်သည် မိမိ်ကိုယ်ကိုနားမလည်နိုင်ဘဲ နာရီအတန်ကြာ တွေးမရဖြစ်နေသည်။ ထိုတည်းခိုခန်း ကထွက်မသွားချင်လောက်အောင်ဖြစ်နေသည်။ နောက်တွင်သူသည် သူ့၏မြင်းကို စီး၍ဒေ့ရှ်သို့ ထွက်ခွါ ခဲ့သည်။ ခရီးတစ်လေုQmက်စဉ်းစားနေသည်မှာ” ပျောက်ဆုံးခြင်း” သေခြင်းထဲ၌ သူ့သူငယ်ချင်းယာကုပ် အီမန်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ သေခြင်းထဲပျောက်သွားပါသည်၊ အပေါင်းအသင်းများထဲက ပျောက်သွား ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ကပျောက်သွားခဲ့သည်။ မီးခိုးတန်းကဲ့သို့ အာကာသကောင်းကင်ထဲ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရပြီ။ အကယ်၍အီမန်၏ အမြင်သာမှန်ခဲ့မည်ဆိုရင် သူအသက်တာပျောက်ဆုံးမှာ မဟုတ်ဘူး။
အီမန်ဘယ်အရာ၌ မှားနေပါသလဲ? နုတ်ကပတ်တော်၏ သမ္မာတရားနှင့်ဘုရားသခင် အမှန်တကယ် တည်ရှိခြင်းက ဘယ်အရာတွေနည်း?အီမန်သည် ထာ၀ရ၌ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီ။ ထိုစဉ်အီမန်သိထားသောအ ရာက မှားနေ၍ ဖြစ်သည်။ အခုဆိုရင်နောင်တရဖို့ အချိန်နှောင်း သွားခဲ့ပါပြီ။ သူ့အမှားကိုသိမြင်ချိန်မှာ အီမန်ဟာ ပူလောင်နေတဲ့ ငရဲမီးအိုင်ထဲကျရောက်လို့ နေပါပြီ။ ကယ်တင်ခြင်အဖို့ နောင်တရရန် အချိန်နာရီဟာကန့်သတ်ခဲ့ပြီ။ ဤအတွေးအခေါ်များက အာဒိုနီယမ်၏ စိတ်နှလုံးသားထဲ ရိုက်ခတ် နေပါပြီ။ သူ့သူငယ်ချင်းသေဆုံးခြင်းသည် တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုမဟုတ်မှန်း အာဒိုနီယမ်နားလည်ခဲ့ပါပြီ။ အဖခမည်းတော်၏ အစီစဉ်တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ အခြေအနေတရပ်ကြောင့် မဟုတ်နိုင်မှန်း အာဒိုနီယမ် အတွေးပေါက်ခဲ့သည်။
ချက်ချင်းအာဒိုနီယမ်သည် သမ္မာတရား အရှင်ဘုရားသခင် အမှန်တကယ်တည်ရှိကြောင်း နားလည်ခဲ့ သည်။ သူ့မြင်းကို စီး၍အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည်။ သူ့၏ခရီးစဉ်ဟာ ၅ပတ်အတွင်းပြီးဆုံးခဲ့ပြီ။ ငါးပတ် အတောအတွင်း သူစွန့်ပယ်ခဲ့သော မိဘတို့၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ ပြန်လာခဲ့သည်ဖြစ်သည်။ ယခုတွင် သူသည် သူ၏အကျင့်စရိတ္တနှင့်အပြုအမူ၏ အကျိုးရလဒ်ဝိညာဉ်အတွက်ခံပြင်းလျှက်ရှိနေပေပြီ မိမိအပြစ် ကိုသိနားလည်ပြီး နေအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ရှာပြီ။
ထိုအချိန်တွင်အမှုတော်ဆောင် နှစ်ဦးရောက်ရှိလို့လာပါသည်။ အာဒိုနီယမ်အား ကျမ်းစာကျောင်းတက် ဖို့အကြံဥာဏ် တောင်းလျှက်ရှိသည်။ အောက်တိုဘာလတွင်ကျမ်းစာကျောင်းတက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် လုံးလုံးလျှားလျှား မပြောင်းလဲသေးပါ။ အသင်းအမှုဆောင်အနေဖြင့်ကျမ်းစာကျောင်းမတက်ဖြစ်တော့ဘဲ ဓမ္မပညာသင်ကျောင်းသား အနေဖြင့်သာတက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကျောင်း၌ ဂရိနှင့်ဟေဗြဲဘာသာစကား အားဖြင့်သမ္မာကျမ်းစာကို လေ့လာရပါသည်။ နိုဝင်ဘာလရောက်လာသောအခါတွင် သူ၌သံသယ ရှိသမျှ စွန့်ပစ်လိုက်ပြီဖြစ်သည် “သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အသစ်ပြုပြင်ခြင်းအသက်တာ၌လျှောက်လှမ်းပြီ” ဟူ၍ရေးသားခဲ့ပါသည်။ ဒီဖင်ဘာလ၊ နှစ်ရက်နေ့တွင် “သူ့အသက်တာကို ဘုရားသခင်ထံအပ်နှံထားသော နေ့ဖြစ်သဖြင့် “ထိုနေ့ကို ဘယ်တော့မှမေ့မရသော နေ့ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်ကစပြီးသူသည် အသစ်သော သတ္တဝါဖြစ်လာခဲ့သည်။ လောကီအောင်မြင်ခြင်းအားလုံးကို စွန့်ပစ်ခဲ့ပြီ “ဘုရားရှင်ကို မည်ကဲ့သို့ကျေနပ် စေမည်နည်း” ?ဟူ၍သာ မိမိကိုယ်ကိုမေးဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤသည်အရေးပါသောအသက်တာ ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်း ပြောင်းလဲခြင်းက အာဒိုနီယမ်အားဗမာပြည်သို့ သာသနာသွားရောက်ရန် လျှို့ဆော်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သာသနာကွင်းသို့ရောက်သောအခါ အာဒိုနီယမ်ယုဒသန်သည် နှစ်ခြင်းဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဂရိ စကားမှ ဒဒဘစေအငဖသဒဒ ဟူသောစကားအဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်သဘောပေါက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားသာ သနာပြုဆရာမရှိသေးသော ဘုရားမဲ့နယ်မြေ ဗမာပြည်သို့ သာသနာပြုရန် သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ ခါးသီး သောအဖြစ်ဆိုးများတွေ့ကြုံခဲ့သည်။ ထောင်ထဲအသွင်းချခံခဲ့သည်။ မိသားစုထဲ ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ် အဖြစ်ဆိုးတွေ့ကြုံခဲ့သည်။ ဇနီးနှစ်ယောက်လည်းသေဆုံးခဲ့ပြီ၊ သားသမီးအမြောက်အများ သေဆုံးခဲ့သည် အာဒိုနီယမ်သည် သူ့အသက်တာကို မတုန်မလှုပ်ပဲ ခရစ်တော်သခင်ထံ ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည် အတိုင်း သမ္မာကျမ်းစာကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်များ၌လည်း ထိုကဲ့သို့ စစ်မှန်စွာ အသက်တာပြောင်းလဲဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းနေပါသည်။ အာဒိုနီယမ်ကဲ့သို့ စစ်မှန်သော အသက်တာ၌ပြောင်းလဲပြီး ခရစ်တော်အတွက် အမှုဆောင်နိုင်ရန် ဆုတောင်းပေးပါသည်။ ဒေါက်တာဂျွန် အာရ်ရိုက်စ်က (၁၈၉၅-၁၉၈၀)၌ အာဒိုနီယမ်၏ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းကို ရေးသားသီကုံးထားပါ သည်။
-လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာ ပျော်ရွင်မှု အသီးသီးရှာဖွေ
ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိ ၊ယေရှုမှတပါး ရှာမတွေ့ပါ
-ဝါကြွားခြင်းနှင့် အပြစ်များက ကျွန်ုပ်အား အားနည်းစေသည္လ်
kရားရှင်ဝိညာဉ်ပဲ ပြင်မူစဉ် အပြစ်ရှိသမျှ ယေရှုပေါ်ပုံအပ်
နောင်တရလျှက် ယေရှုသခင်နှင့် အတူအစဉ်
-အိုခရစ်တော်ရှင်၊ ကောင်းကြီးများ သွန်းလောင်း
ကိုယ်စိတ်နှလုံး ပေးကမ်းလှူဒါန်း ယေရှုရှင်
(၁၈၉၅-၁၈၉၀၊ ဒေါက်တာဂျွန်အာရ်ရိုက်စ် သီကုံးသော “ယေရှုသခင်သည်သာ” )။
ကျေးဇူးပြု၍ သီချင်းနံပါတ်(၅) “ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကိုမတ်သတ်ရပ်လျှက် သီဆိုကြပါစို့
-”ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်” “ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ခရစ်တေ်ကို လက်ခံဖို့ရန်
-”ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်” “ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်” အမင်္ဂလာသည်ရောက်လုနီးပါး
(၁၈၃၈-၁၈၇၆၊ ဖိလိပီပလက်စ် သီကုံးသော “ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်” )။
-ဒေသနာတော်မတိုင်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာဂရိတန်အာရ်ချန့်မှ အစပြုဆုတောင်းပေးသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ ၁၈၆၄-၁၉၂၇အီး ၊မေရီဂရီးမ်ရေးသားပြီး သင်းအုပ်ဆရာမှ သံစဉ်ထည့်ထားသော”သခင်စကားပြောတော်မူပါ” ဟူသောဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေး သည်။